एटीएममा पैसा सुरक्षाका लागि चिप कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन, के हो चिप कार्ड ?
काठमाडौं : तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिने चिप कार्ड प्रयोगमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्ता कार्ड सँगै नयाँ एटीएम मेसिन समेत खरिद गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । एटीएम ह्याक प्रकरणपछि चिप कार्ड र यसका लागि नयाँ एटीएम मेसिनको प्रयोग झनै् अत्यावश्यक देखिएको छ । नियामक केन्द्रीय बैंकले पनि फेरि ३ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा चिप कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको बताएको छ ।
यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चिपमा आधारित एटीएम कार्ड ढिलो गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोगमा ल्याउन थाले पनि यस्ता कार्ड पढ्न सक्ने एटीएम मेसिन र पुराना कार्डलाई चिपमा भने अझै बदलेका छैनन् । बैंकहरुले प्रविधि, बजेटलगायतका कारण देखाएर चिप कार्ड मेसिन प्रयोगमा ल्याउन ढिलाई गरेका हुन् । एटीएम कार्ड चिपमा आधारित भए पनि मेसिन पुरानै हुँदा यसलाई सुरक्षित मानिंदैन ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बैंकहरुले प्रविधि, बजेट लगायतका कारणले चिप कार्ड मेसिन समयमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रविधि, बजेट लगायतका कारणले बैंकहरुले पुराना मेसिन हटाएर नयाँ मेसिन राख्न ढिला भएको हो ।’ विस्तारै पुराना मेसिन बिस्थापन गरेर नयाँ मेसिन आउने उनको भनाई छ । साथै, उनले नबिल बैंकको सबै कार्ड र मेसिन चिपमा आधारित भएको जानकारी समेत दिए ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले पनि सबै डेभलपमेन्ट बैंकको नयाँ कार्ड चिपमा गएकाले अब विस्तारै मेसिन पनि चिपमा परिणत हुने बताए । यसका लागि केही समय लाग्ने ढकालले बताए ।
यता, जानकारहरु भने चिप कार्ड मेसिन प्रयोगमा नल्याउदा पनि राष्ट्र बैंकले जरिवाना नगरेकाले वित्तीय संस्थाले ढिलासुस्ती गरिरहेका बताउँछन् । राष्ट्र बैंक चिप कार्ड प्रयोग नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दण्ड जरिवना गर्नुको सट्टा बारम्बार लचिलो बन्दै आएको छ । यसअघि पनि एटीएमको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएसँगै केन्द्रीय बैंकले २०७२–७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सोही आवको असोजसम्म चिपमा आधारित कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
यो निर्देशन दिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूर्णरुपमा चिप कार्ड मेसिनको प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । अहिलेसम्म पनि केही बैंकका केही एटीएम मेसिनले मात्रै चिपमा आधारित कार्ड पढ्न (रिड) सक्छन् । चिप कार्ड मेसिनको प्रयोगमा नल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै पनि कारबाही गर्ने तयारीमा केन्द्रीय बैंक छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ एटीएम कार्ड दिँदा चिप कार्ड नै दिएकाले मेसिन पनि विस्तारै यसमै आधारित भएर ल्याउने बताए । उनले भने, ‘सबै बैंकहरुले नयाँ वितरण गर्ने कार्ड चिप कार्ड हुन् । हामीले निर्देशन दिएका छौं । विस्तारै एटीएम मेसिन पनि परिर्वतन हुन्छन् । अहिले नै कारबाहीको कुनै तयारी गरेका छैनौं ।’
जानकारहरु भने चिपमा आधारित कार्ड प्रयोमा ल्याए पनि सबै बैंकले यसलाई पढ्न सक्ने एटीएम मेसिन अद्यावधिक नगर्दासम्म सुरक्षा कमजोरी यथावत् रहने बताउँछन् । सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकलाई बैंकिक सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल प्रयोगमा ल्याएका डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेडलगायतका ‘म्याग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड’ लाई ‘चिप बेस्ड कार्ड’ ले प्रतिस्थापन गर्न भनिएको हो ।
के हो चिप कार्ड ?
चिप प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षाका लागि एटीएममा राखिने एउटा उपकरण हो । यसमा कार्डवालाको हस्ताक्षर लगायत अन्य धेरै विवरण समावेश हुन्छ । यस्तो कार्डमार्फत रकम निकाल्दा मेसिनले ग्राहकको धेरै विवरण प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले सामान्य कार्डभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ । चिपमा भएको ग्राहकको विवरण नक्कल (कपी) गर्न सकिदैन ।
चिप नभएको अर्थात् म्याग्नेटिक कार्डमा रहेको ग्राहकको विवरण भने नक्कल गर्न सकिन्छ । यसकारण चिप भएको एटीएम कार्ड बढी सुरक्षित मानिन्छ । हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिपमा आधारित कार्ड बनाइसकेका छन् ।
तर, कार्डमा प्रयोग गरिएका चिप पढ्न सक्ने गरी एटीएम मेसिन स्तरोन्नति नगर्दा कार्डमा रहेको ग्राहकको विवरण चोरीको सम्भावना बढी हुन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ह्याकरहरुले एटीएमबाट पैसा चोरी रहेका छन् । चिप कार्डबाटको कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षित मानिन्छ ।